राजाको फोटोले किन दुख्यो गभर्नरको टाउको ? विज्ञ भन्छन् : गलत निर्णय
सम्झना घिमिरे काठमाडौं, १२ वैशाख
राजाको तस्वीर अंकित नोट नचलाउने नेपाल राष्ट्र बैंककाे निर्णयकाे धेरैले आलोचना गरेका छन् । अर्थविददेखि सर्वसाधारण तथा राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले समेत राष्ट्र बैंकले इतिहासलाई जलाउन लागेकाे भन्दै निर्णयकाे विराेध गरेका हुन् ।
'सफा नोट नीति २०७३' लाई संशोधन गरी राष्ट्र बैंकले आइतबार राजाको तस्वीर अंकित भएको नोटलाई पुन: निष्कासन अयोग्य नोटको रूपमा वर्गीकरण गर्दै त्यस्ता नोटलाई चलन चल्तीका लागि नपठाउने निर्णय गरेकाे थियाे । अर्थात्, केन्द्रीय बैंकले राजाको तस्वीर अंकित नोट चलनचल्तीमा नपठाउनू भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएकाे थियाे । यसकाे अर्थ सर्वसाधारणसँग भएका नाेट नचल्ने भनिएकाे भने हाेइन, अब उप्रान्त यस्ता नाेट नपठाउनू भनिएकाे हाे ।
केन्द्रीय बैंकले गरेकाे निर्णय ः
यद्यपि,, याे निर्णयलाई लिएर धेरैले राष्ट्र बैंककाे नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्, 'राजाको फोटोले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकाे टाउकाे किन दुखायाे ?' कतिपयले भने निर्णय ठीकै भए पनि सन्दर्भ ठीक नभएकाे बताएका छन् ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी राष्ट्र बैंकले दिएकाे निर्देशन असान्दर्भिक र तर्कहीन रहेकाे बताउँछन् ।
'यो निर्णय अहिले गर्नु कुनै अर्थमा पनि ठीक होइन । वास्तवमा ३ कारणले नोट परिवर्तन गरिन्छ । राजनीतिक हलचल वा फेरबदल, डिमोनिटाइजेसन र मुद्रा च्यातिएको वा प्रयोगमा आउन नसक्ने भए मात्र मुद्रा हटाइन्छ', उनले भने, 'तर, यहाँ त कुनै कारण नै दखिँदैन । यो नोट मात्र नभएर इतिहास पनि हाे । त्यसैले पनि फोटो हटाउन हुँदैन थियो ।'
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि राष्ट्र बैंककाे पछिल्लाे निर्णयलाई लिएर आफू आश्चर्यचकित भएको बताउँछन् ।
'अहिले महामारीले देश आक्रान्त छ, उद्योगधन्दा तथा बैंकहरू धराशयी हुने अवस्था छ । यो समयमा मुद्रा हटाउनु राम्रो होइन', उनले भने, 'यो समय त कसरी महामारीसँग लड्ने भनेर सोच्ने समय हो । यसरी अहिले नै मुद्रा हटाउनुपर्ने कारण चाहिँ केही थिएन ।'
कानुनविद् भिमार्जुन आचार्यले उक्त निर्देशनको विरोध गर्दै ट्वीट गरेका छन्, 'पूर्वराजाहरूको तस्बिर अंकित नोटलाई प्रतिबन्ध गरी कतै राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय अखण्डताको लडाइँलाई विषयान्तर त गर्न खोजेको होइन ? आखिर यस्ता नोटहरूलाई यही समयमा निषेध गर्नुपर्ने चटारो के थियो ? यो पक्का हो, यो मुलकमा एउटा यस्तो तप्का छ, जसले कहिल्यै देशको एकता र अखण्डता चाहँदैन ।'
राजाको तस्बिर अंकित नोट नचलाउने निर्णयप्रति राष्ट्र बैंककै कतिपय अधिकारीहरू पनि सन्तुष्ट नरहेकाे स्राेतकाे दाबी छ ।
के भन्छन् गभर्नर ?
आखिर महामारीको समयमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले किन यस्ताे निर्णय गरे त ? उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, 'कोभिड-१९ कै सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले क्लिन नोट पोलिसीलाई रिभिजिट (पुनरावलोकन) गरी जलानमा जाने गरेको, ठूलो संख्याको नोटलाई पुनः बजारमा लैजाने निर्णय गरेको र बजारमा जान अयोग्य नोटबारे परिभाषितसम्म गरिएकाले यो कुरा नयाँ हाेइन । त्यसैले चाँडै प्रेस नोटलाई पालना गर्न अनुरोध छ ।'
यद्यपि, उनको यो निणर्यप्रति खुलेर आलोचना गरिरहेका छन् पूर्वगभर्नर, अर्थविद् र स्वयम राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू । यसअगाडि पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले राजा अंकित नाेट हटाउने प्रयास गरेका थिए । यद्यपि, चौतर्फी आलोचना भएपछि उनकाे प्रयास सफल भएकाे थिएन । हाल उनी अर्थमन्त्री छन् ।
बैंकिङ कसूर मुद्दाका फरार २ जना पक्राउ
कर्जा अवधि थपिन्छ, धैर्य गर्नुस् : गभर्नर अधिकारी